चर्को करले जन्माएको फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति र नेपाली सान्दर्भिकता ! – HostKhabar ::
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति १७८९-१७९९) फ्रान्सको इतिहासको राजनैतिक र सामाजिक उथल-पुथल एवं आमूल परिवर्तनको अवधि थियो जुन १७८९ देखी १७९९ सम्म चल्यो। पछि, नेपोलियन बोनापार्टले फ्रान्सेली साम्राज्यको विस्तारद्वारा केहि अंशसम्म यस क्रान्तिलाई अघी बढाए ।
क्रान्तिको फलस्वरूप राजालाई गद्दीबाट हटाइयो, एक गणतन्त्रको स्थापना भयो, रक्तपात पूर्ण संघर्षको समय चल्यो, र अन्ततः नेपोलियनको तानाशाही स्थापित भयो जसबाट यस क्रान्तिको अनेक मूल्य र मान्यताहरू पश्चिमी यूरोप तथा बाहिर प्रसार भयो। यस क्रान्तिले आधुनिक इतिहासको दिशा परिवर्तन गरिदियो ।
यसबाट विश्वभर निरपेक्ष राजतन्त्रमा ह्रास आउन शुरू भयो, नयाँ गणतन्त्र एव्ं उदार प्रजातन्त्र स्थापना भयो। फ्रान्समा धेरै पहिलेदेखि निरंकुस शासन चलेको थियो । फ्रान्समा लुई चौधौं योग्य भए पनि उनका छोरा लुई पन्धौं योग्य थिएनन् । लुई चौधौंको मृत्युपछि सन् १७१५ मा ५ बर्षको उमेरमा लुई पन्धौं गद्दिमा बसेका थिए ।
उनी अयोग्य, विलासी र अदुरदर्शी थिए । सन् १७७४ मा उनको मृत्यु भएपछी उनका छोरा लुई सोह्रौ २० बर्षको उमेरमा गद्दिमा बसे । यी सबै राजाहरु निरंकुस भएकाले जनताहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि रुपमा शोषित थिए । सन् १७८९ मा फ्रान्समा निरंकुस शासन व्यबस्थालाई समाप्त गर्न ठुलो क्रान्ति भयो । उक्त क्रान्तिलाई फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति भनिन्छ ।
* राजनीतिक कारण
फ्रान्समा धेरै पहिलेदेखि निरंकुस एबम् स्वेच्छाचारी शासन चलेको थियो । शासकहरू जनहितका काम गर्न छाडीसकेकाले जनताले ठुलो दुख पाएका थिए | उनीहरुलाई कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन। त्यस समाएको फ्रान्सको संसदलाई इस्टेट जनरल भनिन्थ्यो तर विगत १७५ वर्षआघि ( सन् १६१४ – १७८९ ) सम्म यसको बैठक नबोलाई राजाहरुले मनोमानी एबम स्वेच्छाचारी शासन चलाईरहेका थिए । राजाका आसेपासे तथा दरबारी ऐसआराम तथा भोगबिलाशमा व्यस्त रहने भएकाले जनताको भलाईमा ध्यान दिदैनथे । जनतालाई कुनै राजनीतिक अधिकार थिएन | कुनै पनि व्यक्तिलाई एक आग्यापत्र (letter de-cachet) द्वारा कैद गर्न सकिन्थ्यो ।
* सामाजिक कारण
फ्रान्सको समाज मूलतः सुबिधप्राप्त वर्ग र सुबिधाअप्राप्त वर्गमा विभाजित थियो । सुविधा प्राप्त वर्गमा कुलीन तथा पादरीहरु र सुबिधा अप्राप्त वर्गमा मध्यमवर्ग, बौद्दिक वर्ग कालिगढ, व्यापारी, किसन तथा मजदुरवर्ग पर्दथे । पादरी तथा कुलीन वर्ग सबै किसिमका सुविधाबाट नजिक थिए । उनीहरुको सामाजिक स्तर उच्च ठानिन्थ्यो।
भने अन्य वर्गलाई तल्लो स्तरको ठानेर उनीहरुलाई कुनै पदमा नियुक्ति गरिदैनथ्यो। पादरी तथा कुलीन वर्ग विशेष सुबिधा उपयोग गर्दथे भने सर्वसाधारणमध्ये किसान तथा मजदूरको अवस्था एकदमै गुज्रेको थियो । स्वतन्त्र किसानको जग्गा जमिन हुन्थ्यो। यी किसानले अनेकानेक कर तिर्नु पर्दथ्यो भने अर्धदासले जागिरदारको खेतमा काम गर्नु पर्थ्यो भने स्वतन्त्र किसानले नगद तिर्नु पर्थ्यो। पादरी र कुलीन वर्ग करबाट मुक्त थिए ।
पादरी वर्ग प्रथम स्टेट सदस्य भनिन्थे । चर्चको आफ्नो बेग्लै सरकार थियो । यसको आफ्नै संगठन, न्यायलय थियो र आफ्नै आर्थिक स्रोत थियो। चर्चको उच्च पदमा कुलीन वंशको व्यक्ती नियुक्त हुन्थेर आम्दानी भोगविलास जीवन बिताउथे । साधारण पादरी दोश्रो श्रेणीका थिए।
यिनीहरू इमानदार हुन्थे तर यिनीहरूको अवस्था भने एकदमै नाजुक थियो। यिनीहरूको अवस्था साधारण वर्गको जस्तो थियो। उच्च पादरीको भोग विलासपूर्ण जीवन देखेर यिनीहरू रिसले आगो हुन्थे। यिनीहरू सुधारवादी र आन्दोलनप्रती समेत जागरुक थिए। फ्रान्समा क्रान्ति हुँदा यिनीहरू अग्रमोर्चामा देखा परे।
कुलीनवर्ग जो विशेषाधिकार सम्पन्न थियो, यसलाई फ्रान्समा दोश्रो स्टेट भनिन्थ्यो। यिनीहरूलाई मेरा मालिक (My Lord) र अन्न दाता (Your Grace) भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। राजदरबारमा यिनीहरू भेला भैरहन्थे र राज्यको प्रमुख ठाँउमा यिनीहरूको नै पहुँच थियो । इङ्ल्याण्डको जस्तो जेठो छोराले मात्र कुलीन पद पाउने नभएर फ्रान्समा कुलीनका सबै सन्तान कुलीन हुन्थे।
यो वर्गले आफ्नो सम्पत्ति जाँड रक्सी, जुवा तास र भोगविलासमा सकेको थियो र धेरै कुलीन गरीब भएका थिए तर बित्थाको अधिकार प्राप्त गरेको हुनाले साधारण वर्ग यिनीहरू देखि सन्तुष्ट थिएनन्। फ्रान्समा क्रान्ती हुँदा यिनीहरू प्रती कसैले सहानुभूति देखाएनन्।
* आर्थिक कारण
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ती हुनुमा फ्रान्सको जर्जर हुँदै गइरहेको आर्थिक कारण पनि थियो । मुलुक ऋणको भारले थिचिएको थियो । प्रत्येक वर्षको बजेट कैयौं करोड घाटा भइ रहेको थियो । यो घाटा पूर्तिको लागि केवल दुईवटा उपाय थिए, नयाँ ऋण लिने या जनतामाथी थप कर लगाउने ।
सरकारलाई ॠण दिन जनताले पत्याउन छोडिसकेका थिए भने जनताहरू पहिला नै करको बोझले यसरी थिचिएका थिए कि नयाँ कर तिर्ने उनीहरूमा कुनै शक्ति थिएन । फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुनु अघि केही अर्थमन्त्रीले फ्रान्सको अर्थतन्त्र सुधारको विभिन्न प्रयास गरेका थिए, जस्तो टुर्गोट, नेकर, केलोन आदि ।
टुर्गोटले भू-स्वामीलाई पनि समान करको दायरामा ल्याउन चाहे तर सामन्तले यिनको विरोध गरेर रानीसँग यिनलाई हटाउन विन्ती गरे । राजा लुई सोर्हौं रानीको कुरा टाल्न सक्दैनथे परिणाम टुर्गोटलाई राजाले पदबाट हटाए । यिनी पछि नेकर नयाँ अर्थमन्त्री बने । यिनको जोड खर्च कम गर्ने कुरामा थियो ।
यिनले देशको आर्थिक अवस्था जनतामा प्रस्तुत गरे जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था कती बिध्न नाजुक रहेछ भनेर पहिलो पटक जनताले थाहा पाए । यिनका खर्च कम गर्ने नीतिबाट खर्चालु र विलासी रानी एन्टोनिएट प्रसन्न भइनन् । राजालाई दबाब दिएर नेकरलाई पदबाट हटाउन लगाइन् ।
* दार्शनिकको भूमिका
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा दार्शनिकहरुको भूमिकाको सन्दर्भमा दुई मत अगाडी आउँछ -एक, दार्शनिकहरुले क्रान्तिको परिस्थितिहरुको सिर्जना गरेर क्रान्ति उत्पन्न गरे र दोश्रो क्रान्तिको स्रोत त्यस समयको राष्ट्रिय जीवनको दोषमा तथा सरकारको भूलमा थियो र दार्शनिकहरुले क्रान्ति उत्पन्न गरेका थिएनन् ।
मन्टेस्क्यु (१६८९-१७५५ ई .) ले आफ्नो पुस्तक ‘द स्पिरिट अफ लज’ (The Spirit of Laws ) मा राजाको दैवी अधिकारको सिद्धान्तको खण्डन गरे र फ्रान्सेली राजनीतिक संस्थाको आलोचना गरे र त्यसको विकल्प पनि प्रस्तुत गरे । उनले “फ्रान्सेली सरकार निरकुंश सरकार छ किनकी फ्रान्समा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै शक्ति एकै व्यक्ति अर्थात् राजाको हातमा केन्द्रित छ ; त्यसकारण फ्रान्सका जनतालाई स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छैन।
” यसै सन्दर्भ मा उनले “शक्तिको पृथकीकरण ” को सिद्धान्त दिए जस अनुसार शासनको तीन प्रमुख अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका को अधिकर अलग-अलग हातमा हुनु पर्ने बिचार राखेका थिए । उनले इंग्ल्याण्ड सरकारलाई आदर्श बताए किनकी त्यहां संवैधानिक राजतन्त्र थियो जसमा त्यहां नागरिकलाई स्वतन्त्रता थियो ।
यस प्रकार मन्टेस्क्युले शक्तिको पृथकीकरणको माध्यमबाट फ्रान्सको निरंकुश राजव्यवस्थामाथि प्रहार गरे। उसको यो विचार यती लोकप्रिय भयो कि ‘द स्पिरिट अफ लज’को तीन वर्षमा छ संस्करण प्रकाशित भयो ।
भोल्टेयर ( १६९४ – १७७८ ई .)ले आफ्नो पुस्तक, “लेटर्स अन द इंगलिश” आदि, को माध्यमबाट ब्रिटेनमा प्रचलित उदार राजनीति, धर्म र विचारको स्वतन्त्रताको चित्रण गरे तथा पुरातन फ्रान्सेली व्यवस्थासँग तुलना गरे र फ्रान्समा व्याप्त बिकृती एवं कमजोरीको उल्लेख गरे । प्रतिबन्धित हुनुको बाबजुद यो पुस्तक बहुत लोकप्रिय भएको थियो ।
भोल्टेयरले चर्चको भ्रष्ट अचारण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन र अत्याचारको विरोधमा लेखे । चर्चको भ्रष्टता माथी औंलाअ उठाउदै उनले उनले लेखे “अब कोही पनि ईसाइलाई बचाउन सकिदैन किनकी एक मात्र ईसाई थिए र उसलाई पनि सुलीमा चढाइयो।” उनले थप लेखे “कुख्यात एवं बदनाम चीजलाई खुट्टाले धसिदियौँ ।
” यो स्पष्ट रूपमा फ्रान्सको निरंकुश राजतन्त्र एवं चर्चको अत्याचारमाथि प्रहार थियो । भोल्टेयर इंग्ल्याण्डको संवैधानिक राजतन्त्रको अनुरूप फ्रान्समा पनि त्यसै अनुसारको शासन स्थापित गर्न चाहन्थे । उनले भनेका थिए “म सयौँ मुसाको स्थानमा एक सिंहको शासन मन पराउँछु ।” भोल्टेयरले क्रान्तिको कुरा गरेनन् तर वैचारिक स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमि तयार गरे ।
रूसोले आफ्नो पुस्तक “एमिली”, “सोशल कन्ट्रयाक्ट” र “रूसोनी” को माध्यमद्वारा मनुष्यको स्वतन्त्रताको कुरा उठाए । उनको भनऐ थियो कि “मनुष्य स्वतन्त्र जन्मन्छ र सर्वत्र जन्जिरमा बाधिन्छ ।” यी जन्जिरबाट मुक्ति पाउनको लागि एक मात्र तरिका छ कि हामी प्राकृतिक आदिम अवस्था व्यवस्थामा फर्कौ ।
रूसोंले बताए की कि सामूहिक इच्छाबाट बनेको राज्यको यो अनिवार्य तथा सार्वभौम कर्तव्य हो कि यो सम्पूर्ण समाजको सर्वोपरि मान्य हुने कार्य संचालित गरोस् । जो जसलाई कार्यपालिका शक्ति सुम्पिएको छ्; उनीहरु जनताको स्वामी होईनन्, उनको कार्यकारी हो र उनका कर्तव्य जनताको आज्ञाको पालन गर्नु हो ।
यस प्रकार उसलाई दृढ़ विश्वास थियो कि सर्वोपरि सत्ता जनताको हातमा हुन आवश्यक छ, कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको हातमा होईन। सार्वभौम सत्ता जनताको इच्छामा निहित हुन्छ जसलाई “जन इच्छा” (General Wills ) भनियो । नेपोलियनले उनको महत्वको स्वीकार गर्दै भनेका छन् कि “यदि रूसो नभएका भए फ्रान्समा क्रान्ति हुँदैनथयो ।
क्वेस्ने अर्थशास्त्री थिए । यिनी फ्रान्सको तत्कालीन अर्थ व्यवस्था परिवर्तन चाहन्थे
तत्कालीन फ्रन्सेली राजा लुई सोह्रौले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी ढुकुटी नै सिध्याएको कारण जनतालाई आधारभूत सेवा दिन नसक्दा आम जनतामा आक्रोश पैदा भई उक्त क्रान्तिको लागि बस्तुगत परिस्थिती अनुकुल बन्न पुग्यो ।
सन् १७८९ को सुरुवातसँगै फ्रान्सेली स्टेट जनरलका तीन प्रतिनिधि तप्कामा फरक किसिमका अन्तरविरोधहरु देखा पर्न थाले । ती तीन तप्काहरु थिए कुलिन वर्ग, पुरोहित वर्ग र सामान्य जनता ।
राजाले तीनवटै तप्काका प्रतिनिधिहरुलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो मन्त्रीगण मार्फत राज्य सञ्चालन गर्दा राष्ट्र नै धारासायी बन्न पुगेका कारण क्रान्तिका ज्वारभाटा आउनु र जनआक्रोस बढ्नु स्वाभाविक नै थियो ।
फ्रान्सको इतिहासमा नै सबैभन्दा संकट सन् १७८६ को औद्यौगिक संकट र सन् १७८७ र १७८८ मा देशैभरि खडेरी पर्न गई अन्न उत्पादनमा कमी भएको कारणले फ्रान्स भरी नै आर्थिक मन्दी आउनु फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका लागि उर्वर वातावरण बन्दै गएको थियो । अनिकाल र मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता संकटग्रस्त जीवन विताउन वाध्य हुनु नै उक्त क्रान्तिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्यो ।
स्टेट जनरलका कुलिन वर्ग, पुरोहित वर्गहरु पनि सामान्य जनताका प्रतिनिधि जस्तै राजतन्त्र विरुद्ध आक्रोसित बन्दै जानु नै राजतन्त्रको अवशान हुने अर्को मुख्य कारण थियो । अर्कोतर्फ सामान्य जनताको प्रतिनिधि भने पूरै आक्रोशित थिए । लुई सोह्रौले करिव १ सय ५० वर्ष पश्चात बढ्दो आर्थिक संकट समाधान गर्नको लागि भर्साइल स्टेट जनरलको बैठक बोलाउन वाध्य भए ।
स्टेट जनरल बैठक
स्टेट जनरलको स्थापना राजा फिलिपद्वारा सन् १३०४ मा भएको थियो । सन् १६१४ सम्म यसको अधिवेशन नियमित जस्तो भइरहेको थियो, तर १७५ वर्षदेखी भने कुनै अधिवेशन भएको थिएन । स्टेट जनरलमा तीन सदनहरु थिए जसमा कुलीन वर्ग, उच्क्ज पादरी वर्ग र साधारण वर्ग थिए ।
हरेक सदन बराबर एक मत मान्ने गरिन्थ्यो र जुनसुकै प्रस्ताव दुई मत भएपछी पारित हुन्थ्यो तर यहाँ साधारण वर्गले जनताको भलाईको लागि लिएर जाने जुनसुकै प्रस्ताव पनि कुलीन वर्ग र उच्च पादरी वर्ग मिलेर त्यसलाई असफल पारिदिन्थे । स्टेट जनरलमा कुलीन वर्गका २८५, उच्च पादरी वर्गका ३०८ र साधारण वर्गका ६२१ गरि १२१४ प्रतिनिधि थिए ।
राजाले भर्साइल स्टेट जनरलका ३ वटै तप्का कुलिन वर्ग, पुरोहित वर्ग र सामान्य जनाताका प्रतिनिधीहरुसँग “राष्ट्रको आर्थिक संकटको समाधान गर्ने उपाय खोज्न चाहन्थे । उनको उक्त भर्साइल स्टेट जनरलका बैठकमा प्रस्तावित एजेण्डाहरु मध्यको प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रमाथिको बढेको ऋणलाई कसरी चुक्ता गर्ने ? र अर्थ व्यवस्था कसरी सुदृढ गर्ने ?” भन्ने थियो ।
उक्त वैठकमा सामान्य जनताका प्रतिनिधिहरु नै लगभग एघार सयको संख्यामा भएकाले उक्त आर्थिक संकटका विरुद्ध, राजा विरुद्ध बढी नै आक्रोशित भए । सामान्य जनताका वकिल र वुद्धिजीवी प्रतिनिधिहरुले राजाका विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै जनताका आवाज उठाएका थिए ।
४ मे १७८९ मा सुरु भएको स्टेट जनरलको बैठकमा लगभग २ महिना बहस भएको थियो यो अधिवेशन नै क्रान्तिको आमन्त्रण भयो ।साधारण वर्गका प्रतिनिधिले स्टेट्स जनरलका सम्पूर्ण प्रतिनिधिको बैठक बेग्ला बेग्लै नगरी संयुक्त रुपमा एकै सभा भवनमा गरिनु पर्ने र संयुक्त प्रतिनिधिको बहुमतद्वारा कुनै पनि निर्णय पारित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए किनकी यसले मान्यता पाउनासाथ स्टेट्स् जनरलमा उनीहरूको बहुमत हुने थियो ।
यसको खतरा प्रथम र द्वितीय वर्गका कुलीन र पादरी वर्गलाई राम्रोसँगले थाहा थियो, त्यसैले उनीहरूले यो कुराको कडा विरोध गरे । र पहिला झैं तीन सदनमा दुई सदनको मत पाएर प्रस्ताव पास गर्ने कुरामा जोड दिन थाले । लगभग महिना दिन सम्म यसको बारेमा छलफल भयो ।
जून ३ मा पादरीवर्गका तीन सदस्री साधारण वर्गमा मिल्न गए र साधरण वर्गका प्रतिनिधिहरूले १७ जून १७८९ मा राष्ट्रिय सभा (National Assembly) को निर्माण गर्ने घोषणा गरे । जुन अत्याधिक मतले पास भयो । उनीहरूको राष्ट्रिय सभाको स्थापना गरेर फ्रान्समा सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा भयो ।
टेनिस कोर्टको सपथ
सामान्य जनताका प्रतिनिधिहरुले लगभग ९६ प्रतिशत स्थान ओगटेकोले जनताको एजेण्डालाई बहुमतद्धारा पारित गर्न चाहन्थे । २० जूनमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू बैठकगर्नको लागि सभा भवन तिर गए तर त्यहाँ ढोकामा ताल्चा लगाइएको थियो र सिपाहीहरू पहरा दिइरहेका थिए ।
त्यो सभा गर्न नदिने योजनाको परिणाम थियो । सभाघर नजिकै टेनिसकोर्ट थियो । सामान्य जनताका निस्काशित प्रतिनिधिहरुले एउटा टेनिस कोर्टको हलमा बैठक सञ्चालन गर्न वाध्य भए । बेलीको अध्यक्षतामा त्यहाँ एउटा सभा भयो र मोनियरले एउटा सपथको प्रस्ताव राखे ।
उक्त बैठकमा फ्रान्सको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्रान्ति गरी नयाँ संविधान जारी नगरेसम्म पछि नहट्ने सपथ खाए । सामान्य जनताका प्रतिनिधिहरुको क्रान्तिकारी निर्णय थाहा पाएपछि लुई १६ औं राजाले उनीहरु विरुद्ध कडा कारवाही गर्ने चुनौतिपूर्ण धम्की दिए ।
त्यसको बदलामा सामान्य जनताका प्रतिनिधिहरुले राजालाई त्यस्तै धम्की दिँदै भने कि “संगिनको धारबाट सक्छौ भने हामीलाई हटाउ” । उक्त धम्की पछि लुई सोह्रौ डराए । अब राजाको केहि उपाय चलेन र उनले राष्ट्रिय सभालाई मान्यता प्रदान गरे र सबै वर्गका प्रतिनिधिहरु मिलेर कुनै पनि निर्णय बहुमतले गर्ने घोषणा गरे । राष्ट्रिय सभाले मान्यता पाएपछी साधारण वर्गका प्रतिनिधिको शक्ति बढ्यो किनकी उनीहरू बहुमतमा थिए ।
अर्थमन्त्री नेकरको बर्खास्त
यसपछि साधारण वर्गका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पास गरेर विशेषाधिकार खत्तम पार्ने र उनीहरूमाथी पनि कर लगाउने योजना गर्न थाले । यो योजना बुझेपछी विशेषाधिकार वर्गका प्रतिनिधिहरूले रानी एन्टोनिएट, राजाका भाइ काउण्ट आर्तोसद्वारा राजालाई दबाब दिएर राष्ट्रिय सभा भङ्ग गर्ने र क्रान्तिकारीलाई दमन गर्न विदेशी सैनिकको सहयोग लिने कुरामा सहमत गराए ।
राजाले पनि जुलाई १७८९ मा पेरिस र भर्साइलमा स्वीस र प्रसियन सेना सैनिक डफ्फा तैनाथ गराए । राजाको यो कदमको विरोध गर्दै साधारण वर्गका राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिले विदेशी सैनिक हटाउन अनुरोध गरे ।
तर उनीहरूको कुराको सुनुवाई हुनु त कता हो कता कुलीन र पादरीलाई पनि करको दायरामा ल्याएर राज्यको अर्थव्यवस्था ठीक पार्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री नेकरलाई पदबाट हटाए ।
पेरिसमा भोका नाङ्गा मानिसहरू सहित विशाल जनसमूहको भीड जम्मा भएको थियो । सर्वसाधारण प्रती सहानुभूति राख्दै विशेषाधिकारवालालाई पनि समान करको दायरामा ल्याउन चाहाने अर्थमन्त्री नेकरलाई राजाले पदच्यूत गरेको समाचार पुगेपछी पेरिसमा रहेको जनसूहमा उत्तेजना फैलियो ।
१२ जुलाई १७८९ मा पेरिसको एउटा सरकारी बगैंचामा भेला भएको भीडलाई एक पत्रिका सम्पादक कोमाइलले चिच्याउदै -“छिटो गरौं भाइ हो, अब एक क्षण पनि नष्ट गर्नु हुन्न । राजाले हाम्रा प्रिय अर्थमन्त्री नेकरलाई पदच्यूत गरे ।
उनको यो पदच्यूत देशभक्तहरूको लागि खतराको घण्टी हो । अब जर्मन तथा स्वीस सैनिकहरूले हामीलाई मार्नेछन् । अब हामी सँग एउटामात्र बाटो छ, त्यो हो हतियार उठाउनु । अब हामी हतियार उठाउँ । हतियारबाट सुसज्जित भएर मात्र हामी आफ्नो र आफ्ना प्रतिनिधिको रक्षा गर्न सक्दछौं ।
” यो भाषणले भीड झनै उत्तेजित भयो । मानिसहरु नारा लगाएर कुलीन र पादरीका घरमा पसेर लुटपाट गर्दै र हतियार भेला पार्दै पेरिसका सडकमा घुम्न थाले । १८ जुलाई सम्ममा यो भीडले २ तोप, ३२,००० बन्दुक ५२००० भाला र अरु थुप्रै स-साना हतियार भेला पार्यो ।
यसपछी हतियार भेला गर्ने भोक जागेको यो भीड बेस्टाइलको किल्लातिर गयो, जुन पेरिसबाट तीन माइल टाढा थियो । यो किल्लामा राजनैतिक बन्दी थिए जसलाई राजाले बिनाकारण थुनेर राखेका थिए । बेस्टाइललाई जनसमूहले घेरेपछी भीषण भिडन्त भयो । बेस्टाइल किल्लाका गभर्नर डि लानी थिए ।
डि लानीले आफ्नो गोलाबारुद सकिएपछी आत्मसमर्पण गरे तर डि लानी र उनका सैनिक जनताद्वारा मारिए । बेस्टाइलको किल्ला ध्वस्त गरेर राजबन्दी लाई मुक्त गरियो । राजा र जनताका बीचमा यस क्रममा नै सहर र ग्रामिण क्षेत्रका विभिन्न इलाकाहरुमा भिषण संघर्ष भयो ।
राजा उक्त संघर्षमा पराजित हुदै जान थाले पछि वर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनःस्थापना गर्दै जनता समक्ष माफी माग्दै उक्त क्रान्तिलाई मान्यता दिन वाध्य भए ।
कुलिन वर्ग र पादरी वर्गका प्रतिनिधिहरुले समेत जनताका प्रतिनिधिहरुलाई समर्थन गर्न वाध्य भएका थिए । उक्त क्रान्ति मार्फत राजतन्त्र समाप्त भयो र केही समय पछि राजालाई माफ माग्न लगाएर संवैधानिक राजाको रुपमा पुनःस्थापना गराए ।
सहर र ग्रामिण क्षेत्रका विभिन्न इलाकाहरुमा विभिन्न कम्युन निर्माण गरिए र उक्त कम्युनहरुको एउटा छाता सङ्गठन फेडेरेसन बनाइयो ।
उक्त महान क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको नारा ‘भातृत्व, समानता र स्वतन्त्रता’ प्रत्येक नागरिकहरुको मुखबाट कठस्त सुनिन्थ्यो । ‘यहाँबाट स्वतन्त्र धर्तीको सुरुवात हुन्छ’ भन्ने नारा देशका विभिन्न भागहरुमा टाँगिएको थियो ।
क्रान्ति पछिको निर्मित संविधानमा लेखिएको वाक्याशं ‘डिक्लेरेसन अफ दि राइटस अफ म्यान एण्ड दि सिटिजन (फ्रान्सेली: Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) (अङ्ग्रेजी: The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen’) झनै चर्चित थियो ।
सबै नागरिक जन्मले बराबर हुन्छन्, अधिकार सबैका लागि बराबर हुन्छ । उक्त संविधानमा फ्रान्सका राजा एउटा प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको केवल सेवक हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएका कारण फ्रान्स एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण हुन पुग्यो । क्रान्ति पछिको क्रान्तिकारी सरकारले भू–कर, व्यक्तिगत सम्पति माथिको कर, उद्योग तथा व्यापारका लागि लाइसेन्स आदि जस्ता कदम अगाडि सार्दै जनताका कामहरु अगाडि बढाउँदै लगे । यस क्रममा नै संविधान अन्तर्गत रहेका राजाले जनताका प्रतिनिधिहरु र तीनका कार्यक्रमहरुमा षड्यन्त्र गर्न थाले पछि लुई सोह्रौ राजालाई अन्ततः मृत्युदण्ड नै दिनु प¥यो ।
क्रान्तिको विभिन्न चरण
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति विभिन्न चरण हुदै गयो । अध्ययनको सुविधाको दृष्टिले क्रान्तिलाई निम्नलिखित चार चरणमा बाडेर हेर्न सकिन्छ।
प्रथम चरण – १७८९-१७९२ ई. संवैधानिक राजतन्त्रको चरण
द्वितीय चरण – १७९२-१७९४ ई. उग्र गणतन्त्रवादको चरण
तृतीय चरण – १७९४-१७९९ ई. उदार गणतन्त्रवादको चरण
चतुर्थ चरण – १७९९-१८१४ ई. तानाशाही एवं साम्राज्यवादी चरण
यस चरणमा पेरिसको भीडले बेस्टाइल किल्ला कब्जा नियन्त्रण स्थापित गर्यो। यस प्रकार क्रान्तिको शुरूआत भयो । वस्तुतः बेस्टाइल किला निरंकुशता एवं अत्याचारको प्रतीक थियो र यसको पतनबाट पुरातन व्यवस्थालाई गहिरो चुनौती आयो। यस घटनाको प्रभाव फ्रान्सको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पर्यो र ग्रामीण क्षेत्रमा सामन्ती कर सम्बन्धी अभिलेखहरू को आगो लगाइयो जलाइयो ।
जनताको यस कारबाहीको राष्ट्रिय सभामा पनि गहिरो असर पर्यो। अतः ४ अगस्ट १७८९ रात भर चलेको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनले कानून निर्माण गरि सबै प्रकारको विशेषाधिकारहरू समाप्त गर्यो ।राष्ट्रिय सभाको महत्वपूर्ण कार्य- एक संविधान का निर्माण गर्नु थियो। अतः राष्ट्रीय सभालाई नै संविधान सभा भनियो र २६ अगस्ट १७८९ मा संविधान सभाले मानवाधिकारको घोषणा भयो ।
राष्ट्रिय संविधान सभाले चर्चको सम्पत्ति जफत गर्‍यो र जनतामाथी चर्चको नियन्त्रण कम गर्ने प्रयास गर्‍यो । यस सन्दर्भमा चर्चलाई राज्यको अधीनमा ल्याइयो र चर्चलाई रोमको पोपको प्रभावबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय चर्चको रूपमा स्थापित गरियो । राज्य प्रति पादरिको वफादारी सुरक्षित गर्नको लागि “सिभिल कन्स्टिच्युसन अफ क्लर्जी” बनाइयो।
जस अनुसार पादरिहरुले राज्य प्रति निष्ठाको शपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो र जनताद्वारा चुनिन पर्थ्यो । पोप र केहि पादरिहरुले यस कदमको विरोध गरे । जुन पादरिहरुले राज्य प्रति निष्ठाको शपथ ग्रहण गरे उनीहरुलाईइ “ज्यूरर” भनिन्थ्यो भने शपथ नलिनेलाई “नन ज्यूरर” भनिन्थ्यो ।
यस कानुनबाट क्रान्तिको विरूद्धमा एक माहोल सिर्जना हुन थल्यो किनभने अहिलेसम्म साना पादरिहरुले क्रान्तिको समर्थन गरेका थिए । अब उनीहरु यसबाट अलग भए र केहि पादरी देश छोडेर विदेश गए र त्यहां युरोपमा क्रान्तिको विरूद्ध प्रचार-प्रसार गर्न थाले ।
राष्ट्रिय संविधान सभाले फ्रान्सको लागि लिखित संविधान बनायो र यस संविधानलाई १७९१मा लुई सोह्रौले आफ्नो स्वीकृति दिए । संविधानमा दुई वटा कुराहरु महत्वका साथ लेखिएको थियो :
एक – राज्यको सार्वभौम शक्ति जनतामा निहित छ
दोश्रो – शक्तिको पृथकिकरण राज्य एवं जनताको हित हुनेछ ।
यद्यपि शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक नै रह्यो तथापी राजाको अधिकारहरु सीमित गरिएका थिए । अब राजा कानुन निर्माता रहेनन् । राजालाई कुनै देशसँग युद्ध वा सन्धि गर्ने अधिकार थिएन । कानून बनाउने अधिकार एक व्यवस्थापिका सभालाई दिइयो र उक्त सभाको सदस्य संख्या ७४५ थियो ।
व्यवस्थापिका सदस्य निर्वाचनको लागि नागरिकहरुलाई सक्रिय र निष्क्रय दौइ भागमा बाँढियो र मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकलाई दिइयो। सक्रिय नागरिक २५ वर्ष से अधिक आयुको नागरिक थिए जो राज्यलाई तीन दिनको आय बराबरको प्रत्यक्ष कर तिर्थे जबकि निष्क्रिय नागरिकमा गरिबहरु थिए ।
राष्ट्रिय सभाले फ्रान्सको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्‍यो । प्राचीन प्रान्तलाई हटाएर सम्पूर्ण देशलाई ८३ डिपार्टमेन्ट (Departmants) मा विभक्ति गरियो । यी डिपार्टमेन्टहरुलाई को Cantan र Commune मा विभाजन गरियो । प्रत्येक ईकाईको शासनको लागि निर्वाचन परिषद् हुन्थ्यो जसको चुनाव सक्रिय नागरिक गर्थे । यस प्रकार स्थानीय स्तर देखी केन्द्रीय स्तर सम्म पुरै राज्य व्यवस्था बर्जआ वर्गमा आयो ।
राष्ट्रिय सभा भंग भए पश्चात् सन् १७९१ मा ७४५ सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा (Legislative Assembly) अस्तित्वमा आयो । यस व्यवस्थापिका सभामा सभामुख /अध्यक्षको दाहिने हात तिर बस्नेलाई ‘दक्षिणपन्थी’ भनियो । उनीहरु अनुदार एवं राजतन्त्रको समर्थक थिए जबकि वायाँ तिर बस्ने लाई ‘वामपन्थी’ भनियो र यस समुह मूल परिवर्तनवादिहरु (Redicals) थियो जो उग्र र क्रांतिकारी थिए ।
रेडिकल्स पनि दुई वर्गमा विभाजित थिए – जिरोन्दिस्ट र ज्याकोबियन। यसैबीच फ्रान्सको क्रान्तिको भय युरोपका अन्य देशहरुमा समेत फैलन लाज्ञो। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रान्सबाट भागेर युरोपका अन्य क्षेत्रहरुमा पुगेका थिए उनिहरुले क्रान्तिको विरूद्ध भावना फैलाए। अर्को तर्फ फ्रान्सका क्रान्तिकारी अन्य देशमा पनि क्रान्तिकारी सिद्धान्तको प्रचार-प्रसार गर्न चाहन्थे।
फलतः युरोपका अन्य राजा सशंकित भए। परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी फ्रान्स र युरोपका अन्य देशहरु सङ्ग आपसी सम्बन्ध चिसो भयो । आस्ट्रियाले क्रान्तिकारीहरुले आग्रह गर्दा गर्दै पनि फ्रान्सको राजतन्त्र समर्थक शरणार्थीहरुलाई शरण दियो । अतः व्यवस्थापिका सभाले अपृल १७९२ ई मा आस्ट्रिया विरूद्ध युद्धको घोषणा गर्‍यो, किन्तु फ्रान्सको सेना नराम्रो सँग पराजित भयो ।
यस पराजयले फ्रान्सको जनतालाई विश्वास भयो कि राजाले आस्ट्रियालाई फ्रान्सको सैन्य शक्ति र सुरक्षाको सबै भेद बताइदिए । अतः राजा प्रति जनताको रवैया उग्र भयो। यो स्थितिमा फ्रान्सेली राजतन्त्रको समर्थनमा प्रसा र आस्ट्रियाले चेतावनी दिदै घोषणा गरे कि “फ्रान्सको जनता राजाको आज्ञा पालन गरुन् अन्यथा हामी उनीहरु विरूद्ध कारवाही गर्छौ।” यस प्रकार फ्रान्सको क्रान्तिले युरोपमा युद्धको स्थिति उत्पन्न गर्‍यो ।
यस घोषणाबाट फ्रान्सका जनता झानै उग्र भए र जनाताले राजालाई घेरे। राजा भागेर व्यवस्थापिका सभाको शरणमा पुगे। अब व्यवस्थापिका सभा भंग गर्ने ; पुनः चुनाव गर्ने, नयाँ व्यवस्थापिका सभा बनाउने र राजतन्त्रको भविष्यमाथि आफ्नो निर्णय दिने बहस चल्न थाल्यो। यसैको साथ व्यवस्थापिका सभा समाप्त गरियो र वयस्क मताधिकारको आधार परमा राष्ट्रिय कन्भेन्सनको गठन भयो ।
२१ सेप्टेम्बर १७९२ मा नेशनल कन्भेन्सनको प्रथम अधिवेशन भयो । यसमा ज्याकोबियन एवं जिरोन्दिस्त दल प्रमुख थिए । ज्याकोबियन अनुशासित र संगठित थिए । पेरिसको भीडमाथी यिनको प्रभाव थिए। यसमा प्रमुख नेता – दांते, रबस्पियर, हीटर आदि थिए। अर्को तर्फ जिरोन्दिस्त थिए – उनीहरु शिक्षित र सुसंस्कृत थिए ।
उनीहरुमा किताबी ज्ञान अधिक थियो । फलतः उनीहरु व्यावहारिक राजनीतिज्ञ बन्न सकेनन् । प्रमुख नेताहरुमा – इस्नार, म्याडम रोलां, ब्रिसो आदि थिए। यो दुबै समुहा गणतन्त्रको हिमायती थिए, विदेशी शक्तिहरु विरूद्ध युद्धको समर्थन गर्थे। अंतर केवल पर्टिको स्वरूपको थियो ।
वस्तुतः जिरोन्दिस्तहरुले फ्रान्समा उदारवादी स्थान ग्रहण गरे। उनीहरुको मान्नु थियो कि क्रान्ति निकै अगडी गैसक्यो र यसको अन्त हुनुपर्छ । उनीहरु र अधिक सामाजिक समानता को विरूद्ध थिए । उनीहरु समानाताअको साटो स्वतन्त्रतामा अधिक जोड दिन्थे । उता ज्याकोबियनहरु समानता माथी अधिक जोड दिन्थे तथा निम्न वर्गप्रति सद्भावपूर्ण व्यबहार गर्थे।
नेशनल कन्भेन्सनको सामु तीन प्रमुख समस्याहरु थिए- विदेशी आक्रमण, राजाको उपस्थिती र गृहयुद्ध। सेप्टेम्बर १७९२ मा फ्रान्स्एली सेनाले बेल्जियममाथी अधिकार कायम गर्‍यो र दक्षिणमा निस र सेवय पनि फ्रान्स्को अधिकारमा आयो । यी विजयबाट हल्याण्ड, अस्ट्रिया, प्रशा र इंग्ल्याण्ड डराए ।
क्रान्तिकारिहरुले १७९२ मा घोषणा गर्‍यो कि ” फ्रान्सको गणतन्त्र स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको भावनामा आधारित छ र यी भावनाहरुको प्रचार्- प्रसार गर्नु उनीहरु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छन् । फ्रान्स जुन जुन क्षेत्रमा आधिपत्य कायम गरे त्यहाँ क्रान्तिकारी सिद्धान्त लागू गर्नेछ र पादरि र कुलीनहरुको सम्पत्ति जफत गरिनेछ र जो सुकैले विरोध गर्छ उसलाई क्रान्तिको शुत्र मानिनेछ ।
” यस घोषणाबाट युरोपको निरंकुश राजतन्त्री देश भयभीत भए र अब फ्रान्सको क्रान्ति फ्रान्सको नभएर पुरै युरोपको भयो । अतः युरोपीय देश क्रान्तिको प्रचार्-प्रसार रोक्न एकजूट भए र इंग्ल्याण्ड, हल्याण्ड, अस्ट्रिया, प्रशाको एक गुट फ्रान्सको विरूद्ध निर्माण भयो । यस गुटले कयौँ युद्धक्षेत्रमा फ्रान्सलाई पराजित गर्‍यो ।
फलतः विदेशी युद्धमा फ्रान्सको पराजय नेशनल कन्भेन्सन समक्ष एक मुख्य समस्या बन्यो। नेशनल कन्भेन्सनले एक प्रस्ताव पारित गरेर राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो र गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । राजामाथी देशद्रोहको मुद्धा चलाइयो र मृत्युदण्डको सजाय दिइयो । राजाको मृत्युदण्डको सवालामा जिरोन्दिस्तहरुको नीति स्पष्ट थिएन।
उनीहरु राजतन्त्रको विरोधी त थिए तर मृत्युदण्डको सवालामा जनमत संग्रहको कुरा गरिरहेका थिए । यस विपरीत ज्याकोबियन्सको यो मत थियो कि “राजाको देशद्रोह सिद्ध भैसक्यो । अतः उनलाई मृत्युदण्ड तत्काल दिनुपर्छ ।” अन्ततः २१ जनवरी १७९३ म लुई १६औँ लाई फाँसी दिइयो ।
नेशनल कन्भेन्सनको सामु ज्याकोबियन र जिरोन्दिस्तहरुको बीच संघर्षको समस्या पनि देखा पर्‍यो । वस्तुतः युद्धको कारण फ्रान्स आर्थिक संकटबाट गुज्रिनु पर्‍यो, मुल्यवृद्धी बढ्यो जसबाट कन्भेन्सनले राहत दिनको लागि विधान बनायो, धनीसंग कर उठाउने नियम बनाइयो । यी कदमहरु जिरोन्दिस्तहरुले विरोध गरे ।
जब ज्याकोबियनाहरुले पेरिसको भीड र कम्यूनको सहायताले कन्वेंशनमाथी आक्रमण गरी सत्ता कब्जा गरे र जिरोन्दिस्तहरुलाई गिरफ्तार गरी आतंकको राज्य (फ्रान्सेली: la Terreur / अङ्ग्रेजी: reign of terror) को स्थापना भयो।
‘आतंकको राज्य’ स्थापनाको साथ फ्रान्स फेरी एक पटक पुनः अव्यवस्थाको शिकार भयो । म्याक्समिलन रबस्पियरको नेतृत्वमा यसको स्थापना भएको थियो । यसमा क्रान्तिकारी, जनसुरक्षाको स्थापना गरिएको थियो र जो कोइले ज्याकाबिन्सको विरूद्ध काम गर्थ्यो उसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्थ्यो ।
रबस्पियर रूसोको विचारधाराबाट निकै प्रभावित थिए । जस अनुसार “सामान्य इच्छा” (जनरल विल)नै सार्वभौमिक इच्छा हो । रबस्पियरले सत्तामा नियन्त्रण राख्नको लागि विरोधीहरुलाई “जिलेटिन” (फांसी)मा शीर छेदन गरे । अतः सबै व्यक्ति आफ्नो जीवनको आयु कती होला भनेर सशंकित रहन्थे ।
१७९३ मा एउटा प्रस्ताव पास गरेर जेकोबिनद्वारा जिरोन्दिस्टका नेतालाई कन्भेन्सनबाट निकालिएको थियो जसको दक्षिण फ्रान्समा भयङ्कर विरोध भयो तर त्यसलाई क्रुरतापुर्वक दवाइयो । यस्तै लिऔं शहरका बासिन्दाले विद्रोह गर्दा कन्भेन्सनले यसको पनि कठोरतापूर्वक दमन गर्‍यो । यो दमनमा विशाल सैनिक शक्तिको प्रयोग गरियो ।
सामन्तका घरहरु नष्ट गरिए । ३,५०० भन्दाअ बढी समाइए र लगभग २,००० लाई मारियो । बेन्दी जिरोन्दिस्ट दल तथा राजतन्त्रवादीहरुको आँखाडा थियो । यो शहरका बासिन्दाले गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह गरे । यहाँ कन्भेन्सनले केरियार नामक व्यक्तीलाई दमनको लागि पठायो ।
यिनले क्रुरताको परिचय दिए । मानिसलाई लाईनमा राखेर गोली ठोकियो र आइमाई, केटाकेटीलाई नदिमा बगाइयो । अन्ततः जुलाई १७९४, मा रबस्पियरलाई कैद गरियो र फाँसी दिइयो । यसैको साथ साथ आंतकको राज्य पनि समाप्ति भयो।
आंतकी राज्य पछि ‘थर्मिदोरियनको प्रतिक्रिया’ (Thermidorian reaction) भयो। उदारवादी थर्मिदोरियन नेताहरूले देशको सत्ता सम्हाले र आंतक राज्यको व्यवस्थाहरूलाई भंग गरियो, ज्याकोबियन्सलाई अवैध घोषित गरियो। आंतकी शासनको दौरान लगाइएको मूल्य तथा पारिश्रमिक माथिको नियन्त्रण उठाइयो। यसबाट मूल्य फेरि बढ्न थाल्यो, सट्टेबाजहरूको प्रभाव बढ्यो र प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोह हुन लाग्यो तर यी विद्रोहहरूलाई दबाइयो ।
*राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गरियो र फ्रेन्च राष्ट्रभाषा घोषित गरियो ।
*दास प्रथा समाप्त गरियो तथा ऋण चुक्ता नगर्ने माथि हाल्ने सम्बन्धी कानुन समाप्त गरियो ।
*जेठो पुत्रलाई नै उत्तराधिकार दिने कानुन समाप्त गरी पारिवारिक जीवनमा समानता स्थापित गरियो ।
*राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना दिवस देखी एक नयाँ पात्रो पंचाग (२२ सेप्टेम्बर १७९२) लागू गरियो
*नाप माप तौलको नयाँ पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू गरियो ।
*कालोबजारी रोक्न राशनिङ व्यवस्था लागू गरियो।
*मुआब्जा दिने नीति समाप्त गरियो । धनी हरुलाई आयकर तथा युद्धकर लगाइयो ।
*धर्मको मामिलामा राज्यले धर्मनिरपेक्ष घोषित गर्‍यो र पादरीलाई कुनै मान्यता दिइएन ।
“डाइरेक्टरी” शासन वस्तुतः नेशनल कन्भेन्सनले एक संविधान निर्माण गरी कार्यपालिकाको उत्तरदायित्व ५ सदस्यीय निर्देशनालय “निर्देशक मण्डल” लाई सुम्पिइयो । निर्देशनालयको सबै सदस्यहरुको अधिकार बराबर थियो । प्रत्येक सदस्य पटक -पटक गरी तीन महिनाको लागि अध्यक्ष हुन्थे। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य कार्यकाल समाप्त हुन्थ्यो र उनको साटो दोश्रो सदस्यको नियुक्ति हुने गर्थ्यो । यस प्रकार नेशनल कन्भेन्सन पछी फ्रान्समा डाइरेक्टरी शासन शुरू भयो जुन १७९५ देखी १७९९ सम्म चल्यो ।
अन्तमा नेपोलियनले डाइरेक्टरी शासनको अन्त गरे। डाइरेक्टरीको यो शासन अव्यवस्थित, दुःखमय रह्यो । सञ्चालक मण्डललाई सशस्त्र सेनाको नियन्त्रण एवं सेनाध्यक्षर जनरलको नियुक्ति, फ्रान्सको तर्फबाट सन्धि तथा युद्धको घोषणा गर्ने अधिकार थियो । संचालक मण्डलको सामु प्रमुख समस्या युद्धको समस्या थियो, अर्को तर्फ डाइरेक्टरी सदस्यहरु अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थिए ।
अतः डाइरेक्टरीको शासन कालमा प्रकारको गडबडी फैलियो, व्यापार ठप्प भयो र विदेश नीति पनि कमजोर रह्यो । यस्तो स्थितिमा फ्रान्सको जनता एक यस्तो शासक (नेतृत्व)को आवश्यकता महसुस गएइरहेका थिए जो देशको आन्तरिक र बाह्य शान्ति र सन्तुलन मिलाउन सकोस् तथा विदेशी शक्तिलाई परास्त गर्न सकोस् । यस कालमा नेपोलियनले सैन्य विजयद्वारा फ्रान्सको सम्मान स्थापित गरे र अन्ततः डाइरेक्टरी शासनको अन्त गरेर सत्तामा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरे।
१७९९ मा नेपोलियनले डाइरेक्टरी (निर्देशनात्मक ) शासन अन्त गरे र फ्रान्सका प्रथम (सल्लाहकार )काउन्सल बने र १८०४ ई. मा उनले आफैलाई सम्राट घोषित गरे र यस प्रकार नेपोलियनको तानाशाही साम्राज्यवादी शासनको शुरूवात भयो ।
संसारलाई प्रजातन्त्र पाठ सिकाउदै मानवता, स्वतन्त्रता र समानताको नारा दिई प्रजातान्त्रिक आदर्शको घोषणा ! फ्रान्सेली क्रान्तिको प्रेरक शब्दहरू -स्वतन्त्रता, समानता र बंधुत्व। यी तीन शब्दले विश्वको राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपमा आमूलचूल परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्यो । जस प्रकार धर्म र संस्कृतिको क्षेत्रमा सत्यम् शिवम् र सुन्दरमको महत्व छ उसैप्रकार राजव्यवस्थामा स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व भावना धेरै देशको संविधानमा देखिन्छ ।
फ्रान्सेली क्रान्तिले सैन्यवादलाई प्रेरित गर्यो । युद्धको समयमा नागरिकहरूको लागि सैनिक सेवा अनिवार्य गरिएको थियो। युद्धको लागि जनताको सेनामा भर्ती हुनको लागि यो पहिलो ओअटक अपिल थियो । बताइएको थियो “अबबाट जबसम्म गणतन्त्रको शत्रुहरूलाई बाहिर निकालिदैन तबसम्म फ्रान्सेली जनताहरू स्थायी रूपमा सैनिक सेवाको लागि उपलब्ध रहनेछन् ।” त्यस अघिसम्म युद्ध राजाको पेशेवर सैनिकहरुद्वारा लडिन्थ्यो । यसै सैन्यवादले पछि अनेक राष्ट्रहरूलाई प्रभावित गर्यो र प्रथम विश्वयुद्धको एक महत्वपूर्ण कारण बन्यो।
फ्रान्सेली क्रान्तिलाई अधिनायकवादको उद्गम स्रोत मानिन्छ। रबस्पिरको ‘आतंकको शासन’ यसको पहिलो मञ्चन थियो । क्रान्तिको दौरान अनेक नीति र सिद्धान्तहरू असफल भयो र परिवर्तन गरिनु पर्यो । फलस्वरूप एक व्यक्तिलाई योग्यतामाथी बल दिइन थालियो। यसैबाट नेपोलियन जस्ता तानाशाहको उदय उद्भव सम्भव भयो। पछि इटली, जर्मनी सहित कयौं देशहरूमा अधिनायकवादको उदय भयो ।
मध्यकालीन सामन्ती अवशेष समाप्त पारेर आधुनिक व्यबस्था लागु गर्यो ! फ्रान्सेली क्रान्तिले सामन्ती व्यवस्थामाथी प्रहार गर्दै सामन्ती विशेषाधिकारहरुको अन्त गर्यो र क्रान्तिको यो उपलब्धि यूरोपको अन्य देशहरुलाई समेत प्रभावित गर्यो । कृषिमा सामन्ती व्यबस्था समाप्त गरि किसानहरुलाई स्वतन्त्र बनेकाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, किसानहरुको जीवन स्तरमा वृद्धि ! कानुनी स्वतन्त्रता एबम समानताको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक सुधार !
इटालीसंगको युद्धमा नेपोलियन विजयी भए । उनले मिश्र(इजिप्ट ) माथि पनि आक्रमण गरे । बिभिन्न युद्धमा विजयी भएकाले उनको लोकप्रियाता बढ्यो । त्यसैले सन् १७९९ मा बनेको संबिधान अनुसार नेपोलियन फ्रान्सको कन्सुल (राज्य सल्लाहकार ) बने । कन्सुल बनेपछि उनले राज्यको आन्तरिक अवस्था ठीक गरे । उनले अनेकौ सुधार गारी फ्रान्सको आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति दह्रो बनाए । नेपोलियनको लोकप्रियता थप बढ्न थाल्यो । र १८०४ मा नेपोलियन फ्रान्सको सम्राट बने । यस प्रकार फ्रान्समा पुनः राजतन्त्र कायम हुन गयो ।
“ला मार्सेलाइज” फ्रान्सको राष्ट्रिय गान बन्यो। यो गीत “क्लाउड जोसेफ रूजेट डी लिस्ले” ले १७९२ मा रचना गरेका हुन् । फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाले यसलाई १७९५ मा राष्ट्रिय गानको रुपमा स्वीकार गर्यो ।क्लाउड जोसेफ रूजेट डी लिस्ले, ला मार्सेलाइजका रचनाकारले १७९२ मा सर्वप्रथम यो गीत गएका थिए ।
विश्व इतिहासमा बौद्धिक क्रान्तिको नामले परिचित फ्रान्सेलि राज्यक्रान्ती राज्य द्धारा जबर्जस्ती थोपरिएको चर्को करको कारण उत्पन्न भएको थियो जसलाइ मलजल गर्ने काम तत्कालीन समयका चर्चित दार्शनिक तथा विचारक रुसो को दर्शनले गरेको थियो।सन १७६२ मा जिन ज्याक रुसो ले “सामाजिक सम्झौता” नामक पुस्तक लेखेका थिए।
रुसोको यस चर्चित पुस्तकको सार थियो ; “राज्यको सम्प्रभुता राजाको दैविशक्ती मा होइन जनताको ईच्छामा निर्भर रहन्छ।” रुसोलाइ फ्रान्सेली राज्यक्रान्ती को अग्रदुत मानिन्छ।
तत्कालिन समयमा फ्रान्सको पादरी र कुलिन वर्गलाइ First State अर्थात “प्रथम राज्य” को रुपमा लिइन्थ्यो । प्रत्यक नागरिकले चर्च लाइ अनिवार्य रुपले चर्को कर तिर्नु पर्थ्यो यस्तो किसिमको करलाइ “टिथ” भनिन्थ्यो। कर तिर्न अटेर गर्नेहरु राज्यको क्रुर दमनको शिकार हुन्थे। तत्कालीन फ्रान्सको कानुन अनुसार सम्राटले आफ्नो आदेश अनुसार जो सुकैलाइ पक्राउ गर्न सक्थ्यो , जुन कानुन “State de Chachet” नामले चिनिन्थ्यो। फ्रान्सको राज्यक्रान्ती को समयमा राजा लुई सोर्हौं थिए।
उनको पालामा यति धेरै ट्याक्स लगाइयो कि नुन देखी लिएर सडक पार गरेको, पुल पार गरेको, बच्चा जन्मेको, मन्छे मरेको ई. मा समेत ट्याक्स लगाइयो। ट्याक्सको भार अतिशय रुपले बढेपछि जनताले ट्याक्स तिर्न सकेनन। फलस्वरुप जनता सडकमा निस्के जसले क्रान्तिको आँधिबेहरी सिर्जना गर्यो। सन १७८९ देखी १७९९ सम्म चलेको यो क्रान्तीको सफलतासँगै विश्व रंगमंचमा आधुनिक युगको शुरुवात भएको मानिन्छ।
अहिले नेपालमा पनि ढाइ शताब्दी अघि फ्रान्समा जस्तै हरेक क्षेत्रमा ट्याक्स बढाइएको छ , अप्रत्यक्ष रुपले बच्चा जन्मे बापत र मृत्यु वापत पनि कर असुल्न थालिएको छ , तत्कालिन फ्रान्समा राजपरिवार र चर्चको विलासितापुर्ण जिवन पुर्ती गर्न ट्याक्स बढाइए जस्तै अहिले नेपालमा कथित संघियताको नाममा हजारौं ढाडे बिरालोहरु को सु:ख सुबिधा र मोजमस्तीपुर्ण जिवनयापनको लागी ट्याक्सको दर बढाइएको छ। भर्खर मात्र केन्द्रिय संसद र प्रान्तिय संसदले आफ्नै तलब भत्तामा दोब्बर बृद्धी गरेको छ।
निकै साँघुरो बजेट क्षमता रहेको यो देशको कुल वार्षिक बजेटको ८०% भन्दा बढि रकम साधारण खर्चमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने कहालिलाग्दो तितो यथार्थको बिच नेताहरु चाहिं देशलाइ सिंगापुर – स्विजरल्यान्ड बनाउछु भन्दै भाषण ठोक्दैछन यि धुर्त फटाहाहरुलाइ थाहा छ ।
यिनले जे बोले पनि पत्याउने र ताली ठोक्ने उल्लूहरुको ठुलो जमात यहाँ छ अनि लुटेरा नेताहरुलाइ यो पनि थाहा छ आफ्ना यि हलि – गोठाला – भरियाहरु आफ्ना नेताहरुले आफ्नै स्वास्नी वा छोरी माथी बलात्कार गरे पनि मुकदर्शक भएर ताली बजाउछन नत्र यत्रो आर्थिक विषमता र आम नागरिकहरुको कष्टकर जिवन पद्धती को बिच नेताहरुले आफ्नै सेवा सुविधा र भत्ता बढाउने तथा करको दर अचाक्ली बढाउने साहस गर्दैनथे । हालसालै संघियताको बढदो खर्च धान्ने नाममा विश्व वैंक बाट १० अरब ऋण लिएको छ अर्थात प्रती नागरिक लगभग ४०० रुपैयाँ । कान्तिपथ बाट साभार